Lehilahy roa no voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny “Commissariat Central” Tanjombato, ny alahady 30 jona lasa teo tokony ho tamin’ny 03 ora hariva teny Ambaniandrefana Tanjombato. Ny faran’ny volana jona teo dia nahazo loharanom-baovao avy amin’ny olona tsara sitrapo ny polisy miasa ao amin’ny kaomisarian’i Tanjombato fa misy tovolahy roa avy any amin’ny faritra Antsobolo sy Ambohibahiny Tanjombato mivarotra fitaovam-piadiana eny amin’iny faritra Tanjombato sy ny manodidina iny. Natao avy hatrany ny fanarahan-dia sy ny vela-pandrika tamin’ny fisavana ireo moto nifamezivezy, araka ny fampitam-baovaon’ny polisim-pirenena Malagasy. Vokany, tovolahy roa no tra-tehaka. Nentina avy hatrany nanaovana fanadihadiana teny amin’ny toeram-piasan’ny polisy teny Tanjombato izy roalahy ka fantatra tamin’ny famotorana ary fa amidy 14 tapitrisa ariary ilay basy MAB. Tafataporitsaka kosa ilay olona saika hividy.